2021 MA Plan 1 (HMO) - Qorshaha Caafimaadka Bulshada ee Washington - Faa'idada Medicare
Bogga ugu weyn > Qorshayaasha Medicare Advantage Plans > Dhamaan Qorshayaasha Medicare ee 2021 > 2021 MA Qorshaha 1 (HMO)
Qorsheheena qiimaha ugu fiican, $ 0 oo lagu daboolayo waxyaabo dheeri ah.
Haddii aad guud ahaan caafimaad qabtid laakiin aad rabto inaad haysato ilaalinta ugu badnaan jeebkaaga, oo lagu daray dawada dhakhtarku qoro, aragga, iyo caymiska ilkaha, qorshahan ayaa adiga kuu noqon kara. Qorsheheena qiimaha ugu fiican, MA Plan 1 ayaa hada laga heli karaa gobolada badankood.
Caafimaadka, Aragtida, Dawooyinka loo qoro, Barnaamijka Jimicsiga, iyo inbadan.
ilkaha $ 0 bixin, xaddid hal booqasho oo kahortag ah sanadkiiba Aan Daboolin
Baashaal $ 0 bixin (ilaa 4 booqashooyinka joogtada ah ee joogtada ah sanadkiiba) Aan Daboolin
Soo-koobidda Macaashka | Resumen de Beneficios
Clark, Cowlitz, King, Kitsap, Pierce, Snohomish, Spokane, Thurston, Walla Walla, Whatcom, iyo Yakima.
Caddaynta Caynsanaanta ayaa dejineysa caymis iyo faahfaahinta lacag bixinta ee adeegyada kala duwan, oo ay ku jiraan lacag-bixinta, lacagta caymiska, xaddidaadda, oggolaanshaha hore, iyo jarista.
Baadh daawooyinka laguu qoro ee dawooyinka laguu qoro si aad u hubiso haddii daawooyinkaaga hadda jira uu daboolayo qorshaha. Raadi macluumaad ku saabsan xaddidaadda iyo xaddidnaanta daawooyinka qaarkood, iyo sidoo kale inta aad bixin doonto. Soo dejiso PDF ama ku raadi magacaaga dawooyinkaaga magaca ku qoran joornaalka internetka.
Taariikhda Ugu Dambeysa ee Cusboonaysiinta: Sebtember 16, 2021